လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင်	Quick Baydin ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍသစ်လေးကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီမှာ လူတွေ အမေးများတတ်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒီအထဲက ကိုယ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းရှိရင် “Click” တစ်ချက်နှိပ်ပြီး မေးလိုက်ရုံပါဘဲ။ မွေးသက္ကရာဇ် မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီတွက်ချက်နည်းက Randomize အပေါ်မှာ အခြေခံထားတာဖြစ်လို့ မေးခွန်းတစ်ခုကို (၂)ခါမေးလို့ မရပါဘူး။ (၂)ခါ (၃)ခါ ထပ်မေးလို့ မေးခွန်းတွေ ကွဲလွဲနေရင် “ပထမဆုံး” ထွက်လာတဲ့ အဖြေကသာ အတည်ဖြစ်ပါတယ်။
အပျော်မေးရင်တော့ “အပျော်တမ်းဗေဒင်” ဖြစ်သွားပါမယ်။ အပျင်းပြေမေးရင် “အပျင်းပြေဗေဒင်” ဖြစ်သွားပါမယ်။ တကယ် ယုံကြည်စိတ်နဲ့ မေးရင်တော့ “တကယ်မှန်တဲ့ ဗေဒင်” ဖြစ်သွားပါမယ်။ ဒါကြောင့် တကယ် သိလိုစိတ်ရှိမှ မေးပါ။ အပျင်းပြေ မမေးပါနဲ့။ တစ်နေ့ကို မေးခွန်း (၃)ခုထက် ပိုမေးရင် နောက်ပိုင်း မေးခွန်းတွေ မမှန်နိုင်တော့ပါ။ မေးခွန်းများလေ၊ အမှားများလေဖြစ်မယ်။
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ အပျင်းပြေ လျှောက်နှိပ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း နှိပ်ကြည့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မေးခွန်းတစ်ခုအတွက် “ပထမဆုံး” ပေါ်လာတဲ့ အဖြေက အတည်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာတော့ မမေ့နဲ့။
အောက်က Drop Down Menu ထဲမှာ မေးခွန်းအုပ်စုလေးတွေ စဉ်ထားပါတယ်။ မေးခွန်းအားလုံးကို မြင်တွေ့လိုလျှင် ညာဖက်အစွန်ရှိ (Calculate ဘေးမှ တြိဂံ)ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။ မေးခွန်းများ Drop Down ကျလာပါလိမ့်မယ်။
84 comments on “လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင်”	yelinthu on June 26, 2011 at 12:46 pm said:
ဂျာဂယ်ကာကိုတော့ကြိုက်တယ်ကွာ မြန်မြန်ခေါ်ပါတော့ဟ ၀င်းဂါးရ
kaunghtet on July 3, 2011 at 9:09 pm said:
i want to know love,bussiness,seamen life kaw kg naing ma lar?
မေနှင်းဆီ on July 11, 2011 at 12:52 pm said:
zaw on July 13, 2011 at 12:03 pm said:
zaw on July 13, 2011 at 12:04 pm said:
zaw on July 13, 2011 at 12:05 pm said:
Victory on July 28, 2011 at 12:02 pm said:
မေသက်ဦး on July 29, 2011 at 1:08 am said:
honey cho on August 21, 2011 at 7:29 pm said:
thazinmay on August 26, 2011 at 12:26 pm said:
thanks for it,somuch.
နွယ် on September 7, 2011 at 12:58 am said:
၇.၉.၂၀၁၁ အတွက် စိုးမိုးမည့် နက္ခတ်ဂဏန်းကို သိချင်ပါတယ်
pp on October 3, 2011 at 3:18 pm said:
လက်ရှိအိမ်ထောင်ရေးအခြေနေနှင့် စီးပွားရေးအခြေနေကို သိချင်ပါတယ်။
zinzin on October 10, 2011 at 7:53 pm said:
Shwe Cin Thant on October 14, 2011 at 8:08 pm said:
Nui on October 27, 2011 at 12:08 pm said:
1/11/2011 အတွက် စိုးမိုးမည့် နက္ခတ်ဂဏန်းကို သိချင်ပါတယ်.
Moe on November 2, 2011 at 4:56 pm said:
1/4/1974 born အတွက် လတ်တလောမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲ ကောင်းခြင်းလား၊ ဆိုးခြင်းလား၊ ဆောင်ရန်၊ရှေင်ရန်လေး ပြောပေးပါ
Somchai on December 6, 2011 at 10:11 pm said:
တင်မိမိ on January 2, 2012 at 9:15 am said:
ချစ်သူနဲ. အဆင်ပြေလား။မိသားစုနဲ.အတူပျော်ရွှင်စွာ ဘယ်တော.နေရ မှာလဲ။
ko ko on February 3, 2012 at 4:02 pm said:
we add your link withanew logo at our webpage
without your permission ,
therefore , now we apologize for it ,
we hope you will agree for it,
Dr.Tin Bo Bo on February 3, 2012 at 6:00 pm said:
ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ နာမည် နဲ့ ၀က်ဆိုဒ်ကို ဖော်ပြတာဘဲ။ တစ်ချို့ စာသားတွေ ကူးယူပြီး ဆရာ့နာမည်ကို ဖျောက်ဖျက်ထားပြီး သူတို့ရေးသယောင်ယောင် လုပ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေတောင် တွေ့နေတာ ဆရာဘာမှ မပြောပါဘူး။ အင်တာနက်က သိပ်ကျယ်ပြန့်ပေမယ့် မြန်မာဆိုဒ်တွေက အရေအတွက်နည်းတော့ နောက်တော့ ဘယ်သူက အစစ်အမှန် ဘယ်သူက ကူးချတာဆိုတာ သိသွားကြတာပါဘဲ။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကြိုက်သလို လင့်ခ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ko ko on February 7, 2012 at 8:41 am said:
one of the website is not thirrico.
Hein Miin Soe on February 14, 2012 at 7:41 pm said:
ကျွန်တော်နာမည်က ဟိန်းမင်းစိုးပါ။ကျွန်တော်က တနင်္လာသား၊19.12.1988 နံနက် ၇နာရီ ၅၅ ၀န်းကျင်မှာမွေးပါတယ်၊၊ဟူးရားဂဏန်းက ၂၇ ပါဆရာ၊ကျွန်တော်က အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ၀ါသနာပါပါတယ်..အခုလဲ FM လိုင်းတစ်ခုမှာ Announcerလုပ်နေပါတယ်..ဒီ၂၀၁၂မှာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်း မှာ တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ ရှိပါသလား..အထူးသဖြင့် သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာပေါ့ဆရာ..သူများတွေမေးထားတာတွေကို တွေ့ ပေမယ့် ဘယ်နေရာကနေ စာရိုက်ပြီးမေးရမှန်းနားမလည်လို့အခုမှ ဒီနေရာကို တွေ့ ပြီး မေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ..အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ..ဆရာဆီကိုလဲ ကိုယ်တိုင်လာမေးချင်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်(မရိုမသေ) ဆရာလိပ်စာကို ကျွန်တော့်ဆီ Mailပို့ ပေးနိုင်မလားခင်ဗျာ
myomin on April 30, 2012 at 5:35 pm said:
NMH on May 3, 2012 at 4:20 pm said:
ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရမလဲ။ မွေးနေ့က (5.12.1987) (စနေ)ဟူးရားနံပါတ်က (၅၆) အကြိုက်ဆုံးနံပါတ်က (၅)ပါ။
sande on May 7, 2012 at 8:05 pm said:
ကျွန်မ တန်ဖိုးထားတဲဟန်းဆက်လေးပျောက်သွားလို့ပါ…သူများတွေမမေးပေမယ့် တကယ့်စိတ်၇င်းမှန်နဲ့ သိချင်လို့ပါ….နာမည်က စုစန္ဒီဝင်း ပါ.. မွေးနေ့က ၂၅.၈.၁၉၉၂ ပါ..ဟူး၇ာဂဏန်းက ၉၅ ပါ…ပြန်တွေ့နိုင်မလားလို့ပါ…သကြ`်န်အကြိုနေ့ကပျောက်သွားတာပါ…
ttn on May 21, 2012 at 12:02 pm said:
ကျွန်မချစ်သူနှင့် ပေါင်းဖက်ရမလာသိချင်လို့ပါဆရာ —————————ဟူးရာ၈ဏန်းက ၂ ပါ ——–ယုံပါတယ်
kyaw lwin on May 27, 2012 at 9:24 am said:
may i know my born ddd/mmm/yyy by english calender…. my born date is ၁၃၉၉..၀ါဆိုလဆုပ်၁၅ …နံနက်၉…တနင်္လာ …. i already check myanmar calender 100 years but i didn’t find yet….. thanks for your help!
ဆုမွန် on May 29, 2012 at 12:19 pm said:
ဆရာ သမီးမွေးနေ့က 7.6.1988 ပါ အဂါင်္သမီး အဓိပတိဖွားပါ
သမီးချစ်သူက 22.5.1987ပါ သောကြာသား ပုတိဖွားပါ
သမီးတို့ ၂ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေး သိချင်ပါတယ်ရှင်
may thin khaing on May 30, 2012 at 12:16 pm said:
ဆရာရှင့် ကျွန်မမွေးသက္ကရာဇ်က 28.9.1975ပါ တနင်္ဂနွေသမီးပါ
ဟူးရားဂဏန်းက 88 ပါ ကျွန်မက အစိုးရ၀န်ထမ်း၊ ဒု-လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ပါဆရာ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီနှစ်အတွင်း အပြောင်းအရွေ့ရှိမရှိသိချင်လို့ပါဆရာ၊ ရှိရင်လည်း ကျွန်မအတွက်အဆင်ပြေ မပြေသိချင်လို့ပါဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ဘယ်အချိန်လောက်သိနိုင်မလဲဆရာ ဘယ်နေရာမှာ ဆရာဆီက စာပြန်တာကို ကြည့်ရမလဲဆရာ
ံHnin Wai Yan Htet on June 8, 2012 at 4:18 pm said:
သမီးရဲ့Birthday က (29.11.1986)စနေနေ့၊ နံနက်(2)နာရီကျော်ကျော်အချိန်ခန့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သမီးက ဥပဒေဘွဲ့ရထားပါတယ်။(2009)ခုနှစ်ကပါ။ သမီးရထားတဲ့ ဘွဲ့နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်မြောက်နိုင်ခြင်းရှိ/မရှိသိချင်ပါတယ်ရှင်။ သမီးက အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Company တစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်နေပါတယ်ရှင်။
ခိုင်စံပယ်ဖူး on June 10, 2012 at 2:25 pm said:
ဆရာရှင့် 8.2.1993 ကသမီးမွေးနေ့ပါတနလာင်္သမီးပါရှင့်ဟူးရားနံပါတ်က58ပါအချစ်ေ၇းကောင်းမကောင်းသိချင်လို့ပါရှင့်
eipoemaung on June 26, 2012 at 3:58 pm said:
ဒီနှစ်ထဲမှာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာကျောင်းတတ်ရင် အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ မိဘကို လုပ်ကျွေးပြုစုချင်လို့ အဆင်ပြေမပြေ သိချင်လို့ပါရှင် .မပြေရင်လည်း အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လို့လုပ်ရမလဲ ဆိုတာလမ်းညွှန်ပေးစေလိုပါတယ်ရှင်.
NTA on June 29, 2012 at 3:01 pm said:
စနေသား ၇.၁၂.၁၉၈၅ (နံနက် ၈နာရီ နှင့် ၉နာရီ ၀န်းကျင်)
အိမ်ထောင်ရေး ကံကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ ဘယ်အသက်ပိုင်းမှာ အိမ်ထောင်ကျနိုင်ပါမလဲ၊ (သို့) လူပျိုကြီးကံ ပါ၊မပါ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
NTA on June 29, 2012 at 3:05 pm said:
ဟူးရား ဂဏန်း (၂၈) ပါ ခင်ဗျ၊
Thiri Chit Sein on July 16, 2012 at 1:15 pm said:
သမီးလေဂျင်ဂျာက 1732011 မှမွေးပါတယ်သူကိုတွက်ကြည်ပေးပါရှင်
hma on July 25, 2012 at 3:32 pm said:
ဒီနှစ်အတွင်း ကလေးရနိုင်ပါသလား ဆရာ
ဟူးရာဂဏန်း ၈၂ ပါ
hma on July 25, 2012 at 3:55 pm said:
မွေးရက် ၁၆-၆-၁၉၈၂ ခု ရာဟုသားပါ
kmma on July 25, 2012 at 10:41 pm said:
ကျမ၏ဟူးရာဂဏန်းမှာ ၁၄ ပါ မွေးရက်က ၂၉-၄-၁၉၈၂ ကြာသာပတေး သမီးပါဆရာ
ဒီ ၂၀၁၂ အတွင်းမှာ ကလေးရနိုင်လား အရမ်းသိချင်လို့ပါ အပျော်မေးတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာ
Dr.Tin Bo Bo on July 28, 2012 at 11:37 am said:
2012 အတွင်းမှာတော့ ရနိုင်မယ် မထင်သေးပါ။ 2013 ကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ သိပ်မစောင့်ရတော့ပါဘူး။
linn linn on December 11, 2012 at 10:45 pm said:
ဇင်ဝေထက် on December 13, 2012 at 7:56 pm said:
paing lay on December 18, 2012 at 9:15 pm said:
ဆရာရှင်. သမီးနာမည်က အေးအေးပိုင်ပါ ။မွေးခုနှစ်က 11.11.1990 တနင်္ဂနွေသမီးပါဆရာ။သမီးရဲ.ဟူးရားဂဏန်း ကတော.69 ပါဆရာ။သမီး သိချင်တာလေ.ကတော.သမီးနိုင်ငံခြားသွားလို.ရှိရင်အဆင်ပြေပါ.မလားဆရာ။ တကယ်လို.ဒီမှာပဲကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုင်ရင် ဘယ်ဟာက ပိုပြီးတော.အဆင်ပြေနိုင်ပါသလဲဆရာ။အခုလက်ရှိမှာတော. အလုပ်လုပ်နေရင်းသင်တန်းတတ်နေပါတယ် ဆရာရှင်.။
Dr.Tin Bo Bo on December 18, 2012 at 9:47 pm said:
၁၁.၁၁.၁၉၉၀ မွေးတဲ့ သူများကတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားထက် ကိုယ့်နိုင်ငံက ပိုအကျိုးပြုတတ်တယ်။ သွားရရင်လည်း ခဏဘဲ ကြာမယ်။ ပြီးရင် ပြန်လာရမယ်။ သွားရကိန်းတော့ ရှိပါတယ်။ မသွားလည်း သင်တန်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး မလုပ်ခင် အတွေ့အကြုံရအောင် လုပ်ငန်းခွင် အရင်ဝင်ကြည့်ပါဦး။ အတွေ့အကြုံကို အရင်ယူပါ။
thandar on December 20, 2012 at 2:33 pm said:
PTZA on January 6, 2013 at 3:23 am said:
တောင်ပေါ်သား on January 8, 2013 at 3:40 pm said:
တောင်ပေါ်သား on January 8, 2013 at 3:44 pm said:
ကျွန်တော်ရဲ့မွေးရက်ကတော့ (5.8.1987 )
စောဒေးဒေးမောင် on January 9, 2013 at 12:48 pm said:
ကျွန်တော်က ဟူးရားဂဏန်း ၃ ပါ နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ရှိမရှိသိခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ
eieiphyoe on January 9, 2013 at 11:36 pm said:
tunnaing on January 10, 2013 at 4:32 pm said:
ဆရာ ကျွန်တော် က စနေသား မွေးသက္ကရာဇ်က 14.8.1976 ဟူးရား ဂဏန်းက 43 ပါဆရာ
ကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ မမိုးစန္ဒာ ဆီက ပြန်ကြိုက်နေသလား သိချင်လို့ပါ ဆရာ
myatlinn on January 14, 2013 at 2:52 pm said:
ကျနော်ကကြသားပတေးသား ကျနော့်ကောင်မလေးက စနေသမီး ပါ
soe min hlaing on January 16, 2013 at 2:45 pm said:
ဆရာ ကျွန်တော်ကအင်္ဂါသား ၁.၅.၉၂ဟူးရားဂဏန်း ၈၈ပါ။ကျွန်တော်ကောင်မလေးချစ်ရေးဆိုထားပါတယ်။အဲဒါသူ့ဆီက အဖြေရနိုင်၊မရနိုင်သိချင်ပါတယ်။
nandaraung on January 21, 2013 at 2:37 pm said:
ဆရာ သမီးက နယ်က လာပြီးအလုပ်လုပ်နေတာပါ သမီးက အစိုးရအလုပ်တခုလုပ်ချင်တာပါ ရ မရ သိချင်လိုပါ သမီးက စနေသမီးပါ ဟူးရား ဂဏန်းက 30 ပါ
aye aye myint on January 23, 2013 at 8:11 pm said:
sumyataung on February 2, 2013 at 12:02 pm said:
မွေးနေ့က 29.3.94ပါ ဖူးစာဖက် ကိုအသေးစိတ်သိချင်ပါတယ်ရှင်
zin mang oo on February 6, 2013 at 12:06 pm said:
မွေးနေ၁၂.၄.၁၉၈၈ ပါ ကျတောအိမ်ထောင်ေ၇းအနာဂတ်ကိုသိချင်လိုပါ
ဖြိုးမင်းလတ် on February 8, 2013 at 11:22 am said:
swesweaung on February 8, 2013 at 9:13 pm said:
ဆရာ အခုလက်ရှိချစ်သူနဲ့ သမီးလက်ထက်ရမလား
Aye Mya Mon on February 9, 2013 at 3:37 pm said:
thet mon on February 11, 2013 at 4:39 pm said:
ကျမက ၁၅.၁.၈၇ မှာမွေးပါတယ်
အခု စင်္ကပူမှာ အလုပ်ရှာနေပါတယ်ရှင်
ရ မရ သိချင်ပါတယ် ရှင်
khaingzarlin on February 13, 2013 at 10:08 pm said:
Mystery305n on February 19, 2013 at 9:41 pm said:
ခိုင်ခင်သန့် on February 24, 2013 at 7:09 pm said:
ဆရာ သမီးရဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်းနဲ့ ပညာရေးအကြောင်းသိပါရစေ။သမီးက ပညာရေးကြောင့်အချစ်ရေးကို လစ်လျူရှုထားခဲ့ပါတယ်။တခါတရံ အထီးကျန်သလိုခံစားရပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီနှစ်အတွက် အချစ်ရေးနဲ့ ပညာရေးကိုမေးရတာပါ။
မျိုးမင်း on February 27, 2013 at 9:56 pm said:
ကျွန်တော် အခုအလုပ်က ဆက်လုပ်ရင်တိုးတက်မူရှိန်ိုင်လား….
ဘယ်လိုမ်ိန်းကလေးမျိုးနဲ့ အိမ်ထောင်ကြန်ိုင်ပါသဲ 28.2.1987
akm on February 27, 2013 at 10:55 pm said:
Thetsumon(or)thetsuhtwe on March 8, 2013 at 12:49 pm said:
ဆရာရှင့်ညီမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကျရင် ကံကောင်းမှာလား။မွေးနေ့ က(20:7:1979)ပါဆရာ။အချိန်က(8:50am)c
Thetsumon(or)thetsuhtwe on March 8, 2013 at 1:35 pm said:
sopyay on March 28, 2013 at 9:52 am said:
Kyawlinnko on March 30, 2013 at 12:00 am said:
ဆရာ facebook မှာlike လုပ်ရင်ဆရာနဲ့ပြောလို့ရလားဆရာ ကျွန်တော့်အကောက်က kyawlinnko.mm
Dr.Tin Bo Bo on March 30, 2013 at 11:15 am said:
Facebook, Gtalk တွေမှာ Chatting ပြောတဲ့ အလေ့အထ မရှိလို့ သိချင်တာရှိရင် ရိုးရိုးစာနဲ့ဘဲ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Thae Su Hlaing on April 3, 2013 at 3:29 pm said:
ဆရာဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရမလဲ။ မွေးနေ့က (27.12.1985) ဟူးရားနံပါတ်က (69)ပါ .ဆရာ သမီးရဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်းဖူးစာဖက် ကိုအသေးစိတ်သိချင်ပါတယ်ရှင်.
myat chai on April 10, 2013 at 9:35 am said:
မွေးနေ့က (6.8.1992)ပါ ဆရာ။အနာဂတ်ကို သိချင်လို့ပါ
ToeToeLin on April 12, 2013 at 12:45 am said:
Khant Hlaing Win on April 14, 2013 at 7:30 pm said:
ကျွန်တော်က တနင်္လာ ကျွန်တော့ကောင်မလေးက အင်္ဂါပါ။အပေါ်မေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော့အတွက်ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ။
Win Htet Naing on April 15, 2013 at 7:25 pm said:
San Htwe on April 16, 2013 at 10:45 am said:
phoyzinoo on April 17, 2013 at 11:43 pm said:
win on April 18, 2013 at 12:57 am said:
အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ တိုးတက်မှု့ရှိ မရှိ သိလိုပါသည်။ (၃) လအတွင်း ပြောင်းလဲမှု့ရှိ မရှိပါ။
မြတ် on April 20, 2013 at 9:24 pm said:
ma on April 22, 2013 at 7:37 pm said:
သမီးချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ဖြစ်မလားသူကစနေ သမီးကကြာသပတေး ပါ
zenda angel on April 30, 2013 at 5:45 pm said:
zenda angel on April 30, 2013 at 5:47 pm said:
ဟူးရားဂဏန်းက 100 ပါ
ူကိုစိုးမြင့် on May 8, 2013 at 11:37 am said:
ဟူးရားဂဏန်းက 11 ပါ
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ယူရင်အဆင်ပြေမှာလားဆရာ
ူကိုစိုးမြင့် on May 8, 2013 at 11:40 am said:
ဆရာ ကျွန်တော်က သောကြာသားပါ ကောင်မလေးက ကြာပတေးပါ
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,926)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,004)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,003)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,450)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,481)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,618)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,640)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,002)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,326)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,279)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,123)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,061)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,858)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,830)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,306)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,149)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,840)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,515)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,209)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,188)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,830)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,725)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,688)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,557)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,273)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,260)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,928)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,719)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,484)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,040)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !